hoo!haa!! – Page 7 –
N’ụbọchị Tusdee gara aga ka ndi uwe ojii nke steeti Anambara nwụchiri otu nwoke aha ya bụ Jemis Nwọra n’ihi na ojirila aka odo tigbue nwunye ya. Ọbụ na ụlọ nwere akara nke abụọ na ogbe Ụmụdiọka, nke dị na Mgbuka Nkpọọ, n’okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Idemili kaRead More →
Na mbụ anyị chetara na mgbe anyị bụ ụmụaka, na agwụgwa bụ ihe anyị ji egwu egwu. Ugbu a, m gaghị echeta ikpeazụ m nụrụ ka mmadụ kwuru, “Gwam Gwam Gwam”, ọzọ. Ọ bụrụla ihe mgbe ochie ndị ugbu a amaghịzị maka ya. Ya mere n’hoohaa ga-akpọtekwa ya n’ụra. AgwụgwaRead More →
A maala ndi uwe ojii mmadụ anọ ikpe ọnwụ n’Uyo nke steeti Akwa Ibom maka na ha gbagburu onye ji ọgba tim tim ebu ndi njem nke a na-akpọ onye ọkada. Aga-akwụgbu ha akwụgbu. Aha ndi a bụ: Mosis Akpaete ji ọkwa nspetọ, Idoko Samsịn, jikwa ọkwa nspetọ, Enobong UdoRead More →
Onye isi ala bụ Muhammadu Buharị ekwela nkwa ịrụ ọtụtụ ọrụ ga-eweta mgbanwe ahụrụ anya na mpaghara ọdịda-ọwụwa anyanwụ ala anyị tupu ya arituo n’ọkwa ọchịchị. O kwere nkwa, n’akụkụ ala anyị ahụ ga-aka mma mgbe ya ga-arịtu karịa ka ọ dị mgbe ya batara n’ọchịchị. Obụ Femi Adeshina bụRead More →
Ụlọ akwụkwọ mahadum ndi ụka katọlik dị na Nneochi na steeti Abịa, akpọrọ Spiritan University, bara na nnukwu iru uju ụbọchị Faraidee gara aga maka ọnwụ otu onye n’ime ha bụ Rev. Fr. Cosmas Agụọcha. Nwoke a ji ụgbọala mahadum a aga mgbe ọ gbakpuru n’okpuru otu nnukwu ụgbọala gwongworoRead More →
Ndi ụka Nglikan, dayọsis nke mgbago ugwu Enugwu (Enugu North Diocese), ewela ndi Fulani mmadụ atọ n’ọrụ ịgbasa oziọma nke Kraist nye ndi nchị ehi nọ n’okpuru ọchịchị ime obodo ndi a: Ezeagụ, Udi na mgbago ugwu Enugwu (Enugu North) nke steeti Enugwu. Bishọp nke ndi dayọsis ahụ bụ SọstenisRead More →
EGBE/EGBERead More →
Ndi Ufuezerakụ nke Ugwulangwu n’okpuru ọchịchị ime obodo Ọhaọzara nke steeti Ebọnyị na-ebizi n’ime oke ịtụ egwụ, maka mbuso agha ndi nchị ehi Fulani. Ndi Fulani a akpakọrọla obosara ala ebe ndi obodo a na-akọ ugbo ma; foro ntụtụ ha taa na ndi obodo ahụ ga akwụtara ha ụgwọ ụtụRead More →
Ndi uwe ojii mba Kenya anwụchiela otu nwoke dị afọ iri anọ, mgbe ọ na esi ọnwụ ile nne ya na ndụ. Nwoke a nke aha ya bụ Chris Wamalwa bụ onye mpaghara Kabuchai. Ọ bụ mgbe ndi na-agafe n’ụzọ malitere nụba mkpu nne nwoke a na-eti maka enyem akaRead More →
“Ọdị ezigbo mkpa na ndi Awụsa na ndi Yoruba matara na enwere ụmụ afọ Igbo ndi bụkwa ezigbo ndi okpukpere chi Alakụba, na-agbanyeghị na ha pere mpe n’ọnụ ọgụgụ. O kwesịrị ka enye ha ezigbo nkwado” Nke a bụ ọnụ mmiri okwu onye isi oche ndi otu na-ahụ maka njemRead More →
<img src="http://www.hoohaa.com.ng/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180727_150946-300×216.jpg" alt="" width="300" height="216" class="alignnone size-medium wp-image-2045" / Ndi oji egbe eje agbagbuela Sunny Ejiagwụ. Sunny bụbu onye isi oche ndi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress, (APC) nke okpuru ọchịchị ime obodo mgbago ugwu Ideatọ nke steeti Imo. Sunny bụ onye eji ọhaneze mara so na mmadụRead More →
Onye isi nchụ aja ụlọ ụka ndi Katọlik n’Obajana nke steeti Kogi bụ Rev. Fr. Leo Michael, ka anyị na-anụ na ndi ntọ tọọrọ n’ụbọchị Tuusdee gara aga. Ọbụ n’obodo ana-akpọ Irepeni, nke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Adevi na steeti Kogi ka anọ tọrọ ụkọchukwu a. N’otu aka ahụ,Read More →
Anonymous on ABACHA, JI, EDE, ỤKWA
Anonymous on IWE/ỌGỤ/AGHA
Uju Nwanekezi on ABACHA, JI, EDE, ỤKWA
Nnaemeka Ibe on ABACHA, JI, EDE, ỤKWA